Android Smartphones ee 200 Euros - Talooyin - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO »Android Smartphones ee 200 Euros - Talooyin
Haddii saarayaasha smartphone waxaa wadaan dagaalka ah oo aan aad ugu mahad naqayaa in Julius Karangi ayaa ku, ku tartamayaa waxqabadka iyo hal-abuurnimo, qof kasta oo aan awoodin in ay bixiyaan model ah in 800 ama euros 1 000 - marka xitaa ma ahan wax ka badan ... - xitaa marka lagu daro qorshe mobile ah oo leh ballanqaad, taas oo ay tahay in lagu bixiyo deynta. Gaar ahaan tan waxaa jira taleefoon horay u wanaagsan oo ku saabsan 500 euros, taas oo horey u soo gashay. Oo xataa aan gaarey heer this, aad u qalabayn karto smartphone a badan la aqbali karo euros 200 gudahood, oo aan snooping suuqa labaad gacanta ama uumiyay.
Xulashadeenu waxay muujinaysaa, waxay u egtahay qiimaha ugu sareeya ee ah qaababka ugu fiican. Waxaa jira qaar ka mid ah xitaa Oofirna in aadan haysan wax badan in ay ku Xasdi in lagu daydo badan ka qaalisan, qalabaysan screens oo tayo fiican leh, Processor awood badan, qadar wanaagsan ee RAM iyo meel lagu kaydiyo, iyo xitaa modules awood leh. Dual-Sim, weyn screen HD Full, beteri awoodda sare, 4 GB ee RAM, 64 GB of kaydinta, booska loogu talagalay module photo sawir, iwm : waxaa jira wax qof walba ah. Iyo ku filan si loo daboolo baahiyaha dhabta ah ee 90% dadka.
Dabcan, dhammaan noocyada lagu soo bandhigay halkan waa Wi-Fi iyo 4G, laakiin waa in la hubiyo ka hor inta aan la iibsanin in jadwallada ay adeegsadeen hawlwadeennada qaabka xogta dhab ahaantii la wadaago - dhammaan dadka hawlwadeenaya ma isticmaalaan dhammaan Joogtada ah ee laga helo France.
Marka la eego baahida apps hadda ah kuma aannu isticmaalin sida lagu daydo waayo qoreysa aad suubban - la 1 GB ee RAM ama 8 GB of kaydinta, tusaale ahaan - Muujinaysaan si dhakhso ah cokan lahaa, gaabis ah oo sidaas daraaddeed niyad jab in isticmaalaan. Dhamaan taleefannada gacanta ee halkan ku yaal waxay leeyihiin ugu yaraan 2 GB oo xasuusta ah iyo 16 GB oo kaydsan, taas oo ah ugu yaraan maalinta ugu dambeysa, xitaa iyadoo la adeegsanayo codsiyo yar. Sidoo kale, waxaan ka reebnay alaabooyinka qalaad, taas, waayo-aragnimadooda, si habboon u socodsii moodaladooda iyaga oo isticmaalaya casriyeyn joogto ah ee barnaamijkooda - oo ay ku jiraan nidaamka. sidoo kale ogsoonow in haddii uu noqon karaa jaban si toos ah iibsato online goobaha Asian kaliya dhawr sano si aad u hesho nooc dhif ah oo qiimo hoose, ciyaarta ma mudan tahay laambadda runtii maanta, gaar ahaan iyada oo la tixgelinayo dammaanadda khasab ah laba sano oo France iyo maaraynta guutooyinkiisa oo inta jeer ee loo isticmaalo France 4 G in ay noqon kartaa dhibaato qalabka loogu tala galay suuqyada kale.
Ugu dambeyntii, xasuusnoow in telefoonnada casriyadoodu ay miisaankoodu ka sarreeyeen, iyada oo la socdo shaashado ballaaran oo ballaaran. Waa ay adag tahay in la helo daydo 5 inch (size screen dadab) ama ka yar, taas oo keeni kara dhibaatooyin qaar ka mid ah wax ka qabashada dadka isticmaala gacmo yar ...
Ugu dambeyntii, xusuusnow, sida caadiga ah ee badeecadaha sare, qiimaha si joogto ah ayaa isu bedelaya, mana aha wax aan caadi ahayn moodooyinka qaarkood in la iibiyo ama la yareeyo dalab. celinta (ODR) inta lagu jiro dallacaad ku meelgaar ah ama ka hor inta aan laga saarin buugan. Fursad aad ku samayso heshiisyo aad u wanaagsan oo aan lagaa bixin.